Baraha Bulshada oo ah Qalab Maareynta Dhibaatooyinka | Martech Zone
Arbacada, Juun 12, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waan ka hor marnay waqtigeenna! Qiyaastii 5 sano ka hor, waxaan iskaashi la yeeshay Adam Small waxaanan dhignay isdhexgal digniin qoraal oo qabow leh WordPress. Rajadeennu waxay ahayd in dadka maareynta dhibaatooyinka ay iibsadaan oo ay u isticmaalaan… ogeysiisyo dheeri ah oo dadka dib ugu celiyaan xarun taliska laga dhisay WordPress si macluumaadkooda loo soo saaro. 5 sano kadib waxayna umuuqataa sida loo maareeyo qalalaasaha dadku hada ugu dambeyn qaadanayaan baraha bulshada si ay hadalka uhelaan!
Si loo gaadho dhagaystayaasha ugu ballaadhan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, hay'adaha dawladda, kuwa aan macaash doonka ahayn, shirkadaha iyo kuwa kaleba waxay u jeestaan ​​warbaahinta bulshada maaraynta dhibaatooyinka.
Runtii waad ku qanacsan tahay isku dheelitirka, fekerka leh infographic oo ka socota Degree Degree Degree kaas oo bixiya jihayn iyo aragti ku saabsan sida loogu isticmaalo warbaahinta bulshada aalad maaraynta dhibaatooyinka.
Tags: shirkadahadhibaatadamaareynta dhibaatooyinkahay'adaha dowladdafaa'iido daro